The Best Space selfies [RANKER] - News Fitsipika
Araka ny mijoro amin'izao fotoana izao, ny rehetra efa ho selfie – dia ny renibeny. Ary raha mangatsiatsiaka toy ny renibeny ny selfies mety ho, -dry zareo niisa tsy niakatra ho any amin'ny toerana selfies nalain'ireo mpanamory ary indrindra tsy ny Mars Rover selfies.
Selfies mpanamory sambon-danitra no tena manentana ny fanahy, satria tsy izy ireo ihany no mampiseho ny sakan'ny olombelona fitrandrahana, izy ireo koa dia mampiseho fa na dia be ny iray egghead ianao, rehetra tia maka selifes. Vao mainka ho hatreo, ny Mars Rover ny selfies dia ohatra ny milina sy ny mpanakanto tsara tarehy.
Na na tsy ianao no olona izay heartstrings nisintona isaky ny mijery sarimihetsika tahaka ny WALL-E, nahita vitsivitsy selfies Rover hahatonga anao hino fa John F. Kennedy teo amin'ny ny zavatra, rehefa nanapa-kevitra izy fa tokony handeha ho any amin'ny volana.
Vakio Full Article
← A Cooler Fomba hanombanana atidoha Fandidiana marary Raspberry Pi 3: ny Sary nahazoan-Card-salantsalany 1.2GHz PC izay vola lany $35 →